Ingxoxo nombhali ozimele u-Israel Moreno | Izincwadi Zamanje
Ingxoxo nombhali ozimele u-Israel Moreno
UDiana Millan | | eziningana
I-Actualidad Literatura ithole injabulo yokuxoxisana nomlobi ozimele u-Israel Moreno. Lo Sevillian ohlala eCeuta, usevele ukwazile ukushicilela izincwadi ezintathu, "Tomorrow is Halloween", enye inkondlo elandelwayo ethi "Today is Halloween", kanye nomdlalo wamahlaya wezothando "Behind my music".
Lo profesa othanda amahlaya, imidlalo yevidiyo nesinema, usinikeza isikhashana sesikhathi sakhe ukuze simazi kangcono.
Izindaba Zokubhala: Phakathi kwezinye izinto, uzichaza njengomthandi wezincwadi, uthando lwakho lwezincwadi luvelaphi? Yini ekwenze wabhala?
U-Israel Moreno: Ukubhala inoveli bekuhlale kuyisifiso sami. Kepha angizange ngiqhubeke nakho. Lo msebenzi, "Kusasa yiHalloween" wazalwa ngenxa yesikripthi sefilimu emfushane eya emakhasini ayisishiyagalombili futhi yafihlwa kwi-hard drive iminyaka emine. Ngelinye ilanga ngacabanga ukuthi ngingayikhipha ngenoveli bese ngisebenza. Le yindlela azalwa ngayo "Kusasa yiHalloween".
KUYA KU: Ngakho-ke Kusasa ngabe i-Halloween yinto yokuqala oyibhalile?
KUYA KU: Yini noma othola ugqozi kuyiphi lapho ubhala?
IM: Imithombo yami eyinhloko yokwesaba ivela kumabhayisikobho. Ngifunde izincwadi ezishaqisayo kakhulu kunalezo ebengingathanda ngoba kunezinhlobo eziningi ezingithandayo, njengezinganekwane zomlando, izindaba eziqanjiwe zobugebengu njll. Kubabhali besimanje umuntu angehluleka ukusho uStephen King. Kepha amanoveli amabili amahle angikhuthaze yiBrac Stoker's Dracula noMary Shelley kaFrankenstein. Babaluleke impela. Kepha isisekelo sami esikhulu kunazo zonke sitholakala othandweni lwami lwe-cinema ngokujwayelekile.
KUYA KU: Abanye bethu banezinto zokuzilibazisa ezithile uma kukhulunywa ngokubhala. Yikuphi okwakho? Ingabe unenkambiso oyithandayo, isikhathi sosuku noma indawo yokukukhuthaza?
IM: Akukho. Ngiyisiphithiphithi kulowo mqondo futhi kwesinye isikhathi ngiyamangala ukuthi imisebenzi iphuma ihlelwe kahle kanjani kuziza nakubalingiswa. Ngibhala lapho ngikwazi khona futhi anginaso isikhathi esiningi. Ngineqembu elisebenzayo elisebenzisana nami ukuze kungabi khona imifantu endabeni noma ekulungisweni.
KUYA KU: Njengoba ushilo kahle, ubukade ufuna ukubhala incwadi, saba kanjani isipiliyoni ngenkathi ushicilela umsebenzi wakho wokuqala?
IM: Kusasa iHalloween ibone ukukhanya lapho ngibambe iqhaza emncintiswaneni wokuqala indie ihlelwe yi-ELMUNDO ne-AMAZON ngo-2014. Yize bengingakwazi ukungena kowamanqamu, kungisizile ukuzenza ngaziwe futhi ngikhangise ngomsebenzi wami. Iphinde yamukelwa kahle kukho kokubili ukugxekwa nemibono. Lokho kwangenza ngaqala ukubhala. Ukuba yinto yokuzilibazisa, angicabangi ukuthi bengizolandela le ndlela ukube bekungenwa kamnandi. Kodwa ngaba nenhlanhla yokuthola ukwesekwa okuningi futhi lokho kwangenza ngazithathela phezulu kakhulu lezi zincwadi.
KUYA KU: Njengomuntu othanda ukufunda kahle, yiziphi izincwadi ongathi zishiye umxhwele kakhulu kuwe?
IM: Ukufunda INkosi Yezindandatho zikaTolkien kwakungaphambi nangemva kwami. Uma kufanele ngibonge othile ngothando lwami lokufunda, ngicabanga ukuthi nguyena. Angazi ngokubhalwe phansi, ngingasho nje ukuthi ngikweleta bonke labo baqondisi bamafilimu abangenze ngaphupha ngezindaba ezimnandi, ezesabekayo ngisho namahlaya othando omculo njengakwincwadi yami yokugcina.
KUYA KU: Tolkien eceleni, obani ababhali bakho obathandayo?
IM: UTony Jiménez, uFernando Gamboa, uJorge Magano, u-Ulises Bértolo. Ngubani ongabazi ukuthi afune izinkomba zazo kwi-intanethi. Zonke zinkulu futhi amanye amakhosi wokushicilela wedeskithophu.
KUYA KU: Njengombhali ozimele, yimuphi umbhali ongathanda ukusebenzisana naye?
IM: NginoTony Jiménez, umbhali waseMalaga ongisethenjwa emibhalweni yezwe eyethusayo. Usenenqwaba yezincwadi ezisezingeni eliphakeme njengeZIBOPHO ZEGAZI, AMATHUNI AMAHLANU NGAPHANDLE KWETABULALELE noma LEYO EFIHLEKILE.
KUYA KU: Okwamanje usudlale izinhlobo ezimbili ezihlukene, amahlaya asabisayo nalawo othando. Wake wacabanga ukusebenzisa igama-mbumbulu?
IM: Ungalokothi, futhi akuhambi emqondweni wami ukudala umsebenzi nokuthi abantu abazi ukuthi yimi umbhali. Kula mazinga azimele akwenzi mqondo.
KUYA KU: Umsebenzi wakho wokuqala ugqame ngombhalo wefilimu emfushane. Uma othile enquma ukuthatha imisebenzi yakho ayise ebhayisikobho, ungathanda ukuthi ibe yimuphi kubo? Ungathanda ukuyidlala nobani?
IM: Iqiniso ukuthi ngingathanda ukubona yonke imisebenzi yami iyiswa ebhayisikobho. Nginendlela yokubhala nge-cinema kakhulu futhi noma imiphi imisebenzi yami ingahle ilunge ngaleyo fomethi. Yize i- "Behind my music" kungaba ngumsebenzi ofanele ngoba kungowomculo futhi kusikrini esikhulu kuzobukeka kufanele ngempela. I-saga ye-Halloween ingathanda ukuyishiyela uchungechunge, ngicabanga ukuthi yilapho izosebenza kahle kakhulu. Iqiniso ukuthi ukubona noma iyiphi yemisebenzi yami kunoma iyiphi yalezi zakhiwo kungangilethela injabulo. Angikhathali ukuthi ngubani owenzile, kepha kuhlala kungaphakathi kwemikhawulo yekhwalithi ephansi ngoba uma kungenjalo bekungaba yisikhuthazo.
KUYA KU: Yini obekuwukuzilibazisa kwakho sekuyinto ebalulekile empilweni yakho.Ungameluleka uthini umuntu oqala ukubhala?
IM: Ngingakutshela ukuthi ubekezele futhi uhlele uhlelo kahle. Ukuba khona kumanethiwekhi omphakathi kubalulekile. Ukwenza i-trailer yencwadi nakho kuyasiza kakhulu. Kepha iqiniso ukuthi ubhala incwadi enhle. Ayikho incwadi yokupheka yokuzimela ezokusiza uma kungekho okuthize okungenzeka kube ngemuva kwayo. Kusebenze kakhulu kimi ukuthumela le ncwadi kumabhulogi wemibhalo ukuze ngithole ukubuyekezwa (ngokwazi ukuthi uzibeka obala ngokubuyekezwa okungalungile, kepha kufanele ungene futhi uthembe umkhiqizo wakho). Lapho-ke umlomo uzobaluleka, okuthi yize kuhamba kancane kuyinjini yokuphumelela.
KUYA KU: Okokugcina ... Unayo iphrojekthi ezandleni zakho?
IM: Yebo, ngashicilela ngo-Okthoba wonyaka odlule "Namuhla yi-Halloween", ukulandela incwadi yami yokuqala ethi "Kusasa yi-Halloween". Kungithathe iminyaka emibili ngisebenza kanzima futhi ngicabanga ukuthi kuzoba wukuvalelisa ngohlobo olwesabekayo, yize kungewona uhlobo lwentsha-yabantu abadala okuyilapho ngihamba kahle khona. Njengamanje ngimisiwe ngandlela thile. Uphumule. Bengiyidinga, kepha nginemisebenzi eminingi engqondweni futhi kungekudala ngizobhala futhi.
Siyethemba ukuthi u-Israyeli uzosebenza nalowo mqondo osengqondweni yakhe, futhi ngethemba ukuthi kungekudala sizokwazi ukujabulela enye inoveli yakhe. Okwamanje, ungalandela ezinyathelweni zakhe ku-lapandilladelmonstruo.com.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Ingxoxo nombhali ozimele u-Israel Moreno
Amaqiniso Ongase Ungawazi NgoJK Rowling
Izihloko zezincwadi eziqanjiwe ezi-5